Esona siqholo siphumelele kule minyaka idlulileyo | Amadoda aQinisekileyo
Amadoda aQinisekileyo | | Iifumba
Amafutha ayimfuneko kwabaninzi. Kwaye kunjalo isiqhumiso esihle yenza ukuba umntu anqweneleke, athandwe okanye athathwe kakuhle, phakathi kwezinye izinto. Amafutha athetha kakhulu ngomntu oyinxibileyo, yiyo loo nto, ukusukela ekudalweni kwawo, isiqhumiso sithathile kwaye siza kuhlala kwindawo ebalulekileyo kwihlabathi lezithambiso. Kule posi sigxile kwisiqholo samadoda, ngakumbi kwifayile ye- Iziqholo zamadoda nguPaco Rabanne. Intsingiselo efanayo nobuhle, ukwazi ukuba kunye nomsebenzi olungileyo.
Uphawu lodumo olaziwayo olunegama Isigidi esinye sesiqholo ngobukhulu obahlukeneyo kwaye unokufumana kuyo Perfume.com, siya phambili kwilizwe leziqholo zamadoda kule post.
1 Ukubaluleka kwesiqholo
2 Amafutha afanelekileyo amadoda
Njengoko uGiorgio Armani watsho:
«Iphunga elikhethwe kakuhle inokuba yinto ebonakalayo. Yinto yokuqala abantu abayivayo xa ungena egumbini kwaye yinto yokugqibela eviwa ngabantu xa uphuma.
Kuba isiqhumiso singaphezulu kokunuka nje, isiqholo sichaza umntu, sinokuvusa iinkumbulo, iimvakalelo, kunye nokuguqula imeko. Enye into enceda ukwenza iziqholo njengesiqu sakho njengoko unokucinga kukuba esi siqholo asinuki ngokufanayo kubo bonke abantu.
Sebenzisa iziqholo ngendlela echanekileyo, elona xesha lilungileyo lokusebenzisa emva kokuhlamba. Ngale ndlela iyakuhlala ixesha elide, nangaphezulu ukuba uyayifaka kwiindawo ezinje ngeendlebe, intamo, ingaphakathi lezihlakala okanye ngaphakathi kwengqiniba. Kwezi ndawo igazi lihamba ngokusondela esikhumbeni kwaye iqondo lobushushu emzimbeni liphezulu kungoko umphunga weziqholo ucotha kancinci kunakwezinye iindawo. Elinye iqhinga lokwandisa ixesha lalo kukusebenzisa isithambisi ngaphambi kwesiqholo. Kule meko, isithambisi esingafakwanga.
Ngokumalunga nokugcinwa kwesiqholo, kulungile ukuba sikugcine kwibhokisi yaso kwindawo eyomileyo kwaye apho singasiniki kukhanya kungako.
Amafutha afanelekileyo amadoda
Ukujolisa kwiziqholo zamadoda, nokuthetha malunga iziqholo zomkhwa ngo-2020, Ukuba kukho uphawu oluphumeleleyo ngodilika bucala, nguPaco Rabanne, ngakumbi, Isigidi esinye nguPaco Rabanne. Buqholo obuqatha kwaye obukhethiweyo obubonisa umntu ozithembileyo ongayekiyo ukonwaba.
Este Isigidi esinye sesiqholo Yenziwe ngamanqaku ayinika ubuntu obuninzi, kwelinye icala, inee-shades ezibomvu ze-mandarin kunye nepepile emnyama eyongezwa kumnatha weziqholo ezifana nesafron okanye i-cardamom. Kwelinye icala, ubungakanani beentonga ze rose kunye nesinamon zibonelela ngevumba kunye nokufudumala okungalinganiyo. Ezinye zezinto ezenziwa ngayo Isigidi esinye sesiqholo nguPaco Rabanne ngamanqaku epatchouli, isikhumba, isandalwood okanye inyibiba.
Kungenxa yokuba ilizwe leziqholo libanzi kakhulu, kodwa iziqholo zePaco Rabanne zezona zinqweneleka kakhulu kubo bonke abantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » Esona siqholo siphumelele kule minyaka idlulileyo
Ezona ntengiso zemoto zibalaseleyo